ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် | MyanmaPress Blogging Platform
MyanmaPress Blogging Platform
WordPress Platform for Burmese
Category Archives: ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်
Leaveareply ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ကို စ​တင်​တည်​ေထာင်​စဉ်​က​ပင် ြမန်​မာ​လို့ ဘ​ေလာ့​ဂ်​ေရး​သူ​များ အ​ခက်​အ​ခဲ​မ​ရှိ​ေစ​ေရး အ​ဆင်​ေြပ​ေစ​ေရး​တို့​ကို ဦး​တည်​ချက်​ထား​သ​ြဖင့် သံုး​သူ​မှတ်​ပံု​တင်​ြခင်း ဘ​ေလာ့​ဂ်​မှတ်​ပံု​တင်​ြခင်း​တို့​ကို မည်​သည့် ကန့်​သတ်​ချက်​မျှ မ​ထား​ဘဲ ဖွင့်​ထား​ေပး​ခဲ့​ပါ​သည်။ သို့​ေသာ် စ​တင်​တည်​ေထာင်​ချိန်​မှ ယ​ေန့​ထိ ၆ လ​ေကျာ်​ကာ​လ​အ​တွင်း​တွင် ြမန်​မာ​လို​ေရး​သား​ေသာ ဘ​ေလာ့​ဂ်​မှာ အ​လွန်​နည်း​ပါး​ေသာ အ​ေရ​အ​တွက်​သာ​ရှိ​ြပီး စ​ပမ်​ဘ​ေလာ့​ဂ်​များ​ဟု ေခါ်​ဆို​ထိုက်​ေသာ ေြကာ်​ြငာ​များ​ကို အ​ဓိ​က​ထား​ေရး​သား​သည့် အဂင်္​လိပ်​ဘာ​သာ​ြဖင့် ေရး​သား​ေသာ ဘ​ေလာ့​ဂ်​ဆိုဒ်​များ​သာ များ​ြပား​လျှက်​ရှိ​ပါ​သည်။ ထို​ဘ​ေလာ့​ဂ်​များ​မှာ အ​ချိန်​က​လ တစ်​ပါတ်​အ​တွင်း တစ်​ေထာင်​ေကျာ်​သည် အ​ထိ စာ​ရင်း​ရှိ​ြပီး ထို​ဘ​ေလာ့​ဂ်​များ​ကို ရှင်း​လင်း​ရ​သည့် အ​လုပ်​မှာ​လည်း အ​ချိန်​အ​ေတာ်​ကုန်​သည့် အ​လုပ်​တစ်​ခု​ြဖစ်​လာ​ပါ​သည်။ ထို့​ေြကာင့် ထို​စ​ပမ်​ဘ​ေလာ့​ဂ်​များ​ကို တား​ဆီး​နိုင်​ရန် နည်း​လမ်း​အ​မျိုး​မျိုး​ကို ရှာ​ေဖွ​ခဲ့​ေသာ်​လည်း ေနာက်​ဆံုး​တွင် အ​ဆင်​ေြပ​ဆံုး​မှာ တိုက်​ရိုက်​ဘ​ေလာ့​ဂ်​ြပု​လုပ်​ခွင့်​ကို ပိတ်​ပင်​ထား​ြခင်း​သာ​ြဖစ်​သည်​ဟု သံုး​သပ်​မိ​ပါ​သည်။ ထို့​ေြကာင့် သံုး​သူ​မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​စဉ် ဘ​ေလာ့​ဂ်​ြပု​လုပ်​ြခင်း​ကို တိုက်​ရိုက်​ြပု​လုပ်​နိုင်​ေတာ့​မည် မ​ဟုတ်​ပါ။ သံုး​သူ​စာ​ရင်း မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​ြပီး ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​သို့ ဝင်​ေရာက်​ြပီး​မှ​သာ ဘ​ေလာ့​ဂ်​ြပု​လုပ်​နိုင်​ေတာ့​မည် ြဖစ်​ပါ​သည်။ အ​ခက်​အ​ခဲ တစ်​စံု​တ​ရာ ရှိ​ပါ​က mail at ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် ေဒါ့ ကွန် သို့​တိုက်​ရိုက်​ေမးလ်​ပို့​၍ လည်း​ေကာင်း အ​ကူ​အ​ညီ​စာ​မျက်​နှာ​တွင် အ​ကူ​အ​ညီ​ေတာင်း​ြခင်း​ြဖင့် လည်း​ေကာင်း ဆက်​သွယ်​၍ အ​ကူ​အ​ညီ​ေတာင်း​ခံ​နိုင်​ပါ​သည်။
This entry was posted in announcements, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် on May 2, 2011 by mmpressadmin. မှတ်​ပံု​တင်​ြခင်း​Leaveareply မှတ်​ပံု​တင်​ရန် စာ​မျက်​နှာ​တွင်​မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​ြခင်း သို့​မ​ဟုတ် Open ID ကို သံုး​၍ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​သို့ ဝင်​ေရာက်​ြခင်း​ြဖင့် ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​၏ မှတ်​ပံု​တင်​အ​သင်း​ဝင်​တစ်​ဦး​ြဖစ်​နိုင်​ပါ​သည်။
ဘ​ေလာ့​ဂ်​ြပု​လုပ်​လို​သူ​များ​အ​တွက် မှတ်​ပံု​တင်​ရန်​စာ​မျက်​နှာ​မှ မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​ပါ​က မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​စဉ် ဘ​ေလာ့​ဂ်​တစ်​ခု​ပါ တ​ပါ​တည်း ရ​ယူ​နိုင်​သ​လို၊ Open ID ကို အ​သံုး​ြပု​၍ ဝင်​ေရာက်​ခဲ့​သူ​ြဖစ်​ပါ​က http://myanmapress.com/wp-signup.php လိပ်​စာ​သို့​သွား​၍ ဘ​ေလာ့​ဂ်​သစ်​တစ်​ခု​ရ​ယူ​နိုင်​ပါ​သည်။
This entry was posted in လမ်း​ညွှန်​ချက်​များ​, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် လမ်း​ညွှန်​များ​and tagged documentations, myanmapress, လမ်း​ညွှန်​ချက်​များ​, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် လမ်း​ညွှန်​ချက်​များ​on December 1, 2010 by mmpressadmin. မ​ဂင်္​လာ​ပါ !
Leaveareply မ​ဂင်္​လာ​ပါ။ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ် ကို​လာ​ေရာက်​လည်​ပတ်​သူ​များ၊ မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​၍ ဘ​ေလာ့​ဂ်​ြပု​လုပ်​ေရး​သား​ြက​ေသာ ဘ​ေလာ့​ဂါ​များ​ကို နှုတ်​ခွန်း​ဆက်​သ​ပါ​သည်။ ေအာက်​တွင်​ေရး​သား​ေဖာ်​ြပ​ထား​ေသာ အ​မှာ​စာ​ကို ဦး​စွာ​ပ​ထ​မ ေသ​ေသ​ချာ​ချာ ဖတ်​ရှု​ေစ​လို​ပါ​သည်။
ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် တွင် မှတ်​ပံု​တင်​စာ​ရင်း​သွင်း​၍ ဘ​ေလာ့​ဂ်​ြပု​လုပ် ေရး​သား​ြက​ေသာ ြမန်​မာ ဘ​ေလာ့​ဂါ​များ​သည် ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် နှင့် သ​ေဘာ​တူ​ညီ​ချက်​အ​ြဖစ် ေအာက်​ပါ​တို့​ကို လက်​ခံ​ရ​မည်။
၁။ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​သည် Digitalization နှင့် Localization တိုး​တက်​ဖွံ့​ြဖိုး​ေစ​ရန်​ရည်​သ​ြဖင့် ထို​ရည်​ရွယ်​ချက်​ပျက်​ြပား​ေစ​နိုင်​သည့်​ကိစ္စ​များ​ကို မ​ြပု​လုပ်​ရ​ပါ။
၂။​ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​၏ ေဒ​တာ​ေဗ့​စ်(Database ကို ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ်​ေဖာင့် အ​သံုး​ြပု​ထား​သ​ြဖင့် ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ်​ကို​သာ အ​သံုး​ြပု​ရ​မည်။ ေဇာ်​ဂျီ​ေဖာင့်​စာ​လံုး​များ​ကို လံုး​ဝ သံုး​စွဲ​ခွင့်​မ​ြပု​ပါ။
၃။​ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​တွင် မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​သူ​များ​၏ ကိုယ်​ေရး​အ​ချက်​အ​လက်​များ​ကို လံု​ြခံု​စွာ​ထိန်း​သိမ်း​ထား​မည်​ြဖစ်​ြပီး အ​လွဲ​သံုး​စား မ​ြပု​လုပ်​နိုင်​ေစ​ရန်​ကာ​ကွယ်​ထား​မည်​ြဖစ်​သည်။
၄။​ဘ​ေလာ့​ဂါ​များ​သည် မိ​မိ​စိတ်​ြကိုက် နှစ်​သက်​ရာ အ​ေြကာင်း​အ​ရာ​ကို ေရး​သား​နိုင်​သည်။ ဘ​ေလာ့​ဂ်​ဆိုဒ်​များ​ရှိ​ေရး​သား​ချက်​များ​ကို စိ​စစ်​အ​ကဲ​ြဖတ်​၍ ကန့်​သတ်​မှု​များ ြပု​လုပ်​မည် မ​ဟုတ်​ပါ။
၅။ အ​ထက် အ​ပိုဒ် ၄ ပါ​ေဖာ်​ြပ​ချက်​အ​ရ​ဘ​ေလာ့​ဂါ​များ ေရး​သား​ေသာ စာ​မူ​များ၊ ေဆာင်း​ပါး​များ၊ နှင့် အ​ေြကာင်း​အ​ရာ​အား​လံုး​တို့​သည့် ေရး​သား​သူ ဘ​ေလာ့​ဂါ​၏ အာ​ေဘာ်​သာ​ြဖစ်​ြပီး ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​နှင့် မည်​သို့​မျှ ပတ်​သက်​ဆက်​နွယ်​ြခင်း ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​အား ကန့်​ကွက်​ြပစ်​တင် ေြပာ​ဆို​နိုင်​ြခင်း မ​ရှိ​ပါ။ အ​ေြကာင်း​အ​ရာ​အား​လံုး​ကို ေရး​သား​သူ ကိုယ်​တိုင်​သာ တာ​ဝန်​ယူ​ရ​မည်​ြဖစ်​သည်။
၆။​ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​သည် ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ်​ေဖာင့်​ကို အ​သံုး​ြပု​ြခင်း ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ်​ကို​သာ သံုး​စွဲ​ရန်​သတ်​မှတ်​ြခင်း​များ​သည် ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​၏ ကိုယ်​ပိုင် သတ်​မှတ်​ချက်​များ​သာ​ြဖစ်​ြပီး ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ်​အ​ဖွဲ့​နှင့်​သက်​ဆိုင်​ြခင်း မ​ရှိ​ပါ။ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​တွင် ေရး​သား​ေဖာ်​ြပ​ချက်​များ​သည်​လည်း ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​၏ အာ​ေဘာ်​သာ​ြဖစ်​ြပီး ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုတ်​အ​ဖွဲ့​နှင့် ြမန့်​မာ​ပ​ရက်​ဆိုဒ် တွင်​မှတ်​ပံု​တင်​ထား​သည့် ဘ​ေလာ့​ဂါ​များ​နှင့် လံုး​ဝ သက်​ဆိုင်​ြခင်း​မ​ရှိ​ပါ။
၇။ အွန်​လိုင်း​မူ​ပိုင်​ခွင့်​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ်​တွင် သီး​ြခား ေဖာ်​ြပ​ထား​မှု​မ​ရှိ​ပါ​က မည်​သူ​မ​ဆို လွတ်​လပ်​စွာ ကူး​ယူ​ေဖာ်​ြပ​ခွင့်​ရှိ​သည်။
This entry was posted in Uncategorized, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် and tagged welcome, wordpress, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် on November 21, 2010 by mmpressadmin. ဝန်​ေဆာင်​မှု​များ​Leaveareply ၁။ ကိုယ်​ပိုင် sub-domain ြဖင့် ဘ​ေလာ့​ဂ်​များ (​သံုး​သူ​တစ်​ဦး​ချင်း​စီ​အ​တွက် ဘ​ေလာ့​ဂ် အ​ေရ​အ​တွက် ကန့်​သတ်​မ​ထား​ပါ။)
၂။ ကိုယ်​တိုင် plugins များ​ကို အ​လုပ်​လုပ်​ေဆာင်​ေစ​နိုင်(Activate) သည်။
၃။ Theme ေပါင်း ()​မှ နှစ်​သက်​ရှာ​ကို ေရွး​ချယ်​သံုး​စွဲ​နိုင်​သည်။ (Theme အ​များ​စု​တွင် သီး​သန့်​ေရွး​ချယ် ေြပာင်း​လဲ​နိုင်​ေသာ အ​ြပင်​အ​ဆင်​များ​(options) ပါ​ဝင်​သည်။)
၄။ ကိုယ်​ပိုင် ဖိုင်​ပို့​တင် သိမ်း​ဆည်း​နိုင်​သည့် ေန​ရာ​တစ်​ခု​နှင့် FileManager သံုး​စွဲ​ခွင့်​ကို ဘ​ေလာ့​ဂ်​တစ်​ခု​စီ​အ​တွက် သီး​သန့်​တစ်​ခု​စီ​ရ​ရှိ​နိင်​သည်။ (yoursubdomain.myanmapress.com/FileManager/) ြဖင့် ဖွင့်​လှစ်​ရန်။
၅။ ဖို​ရမ်​တည်​ေဆာက်​လို​က တည်​ေဆာက်​နိုင်​သည်။ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​၏ အုပ်​စု​ဖ​ွဲ့​ြခင်း နည်း​လမ်း​ကို သံုး​၍ လည်း​ေကာင်း၊ forum server plugin ကို အ​သံုး​ြပု​၍ မိ​မိ ဘ​ေလာ့​ဂ် သီး​သန့် ဖို​ရမ်​ကို လည်း​ေကာင်း တည်​ေဆာက်​နိုင်​သည်။
၆။ Chat Room နှင့် Facebook ကဲ့​သို့​ေသာ Chat Box။
၇။ Facebook၊ Twitter တို့​ကဲ့​သို့​ေသာ လူ​မှု​ကွန်​ယက်​များ​နှင့် ချိတ်​ဆက်​နိုင်​သည်။ (​သက်​ဆိုင်​ရာ plugins များ​ကို activate လုပ်​သံုး​ရန်)
၈။ လူ​မှု​ကွန်​ယက် (Social Network) တစ်​ခု​ကဲ့​သို့ သံုး​စွဲ​နိုင်​ေသာ လုပ်​ေဆာင်​ချက် အ​များ​အ​ြပား ပါ​ဝင်​သည်။
၉။ Facebook တွင် မှတ်​ပံု​တင်​ြပု​လုပ်​၍ သံုး​စွဲ​ေန​သူ​ြဖစ်​ပါ​က ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​တွင် သီး​သန့်​မှတ်​ပံု​တင် ြပု​လုပ်​ရန် မ​လို​ပါ။ Facebook သံုး​သူ​အ​မည်​နှင့် စ​ကား​ဝှက်​တို့​ကို အ​သံုး​ြပု​၍ တိုက်​ရိုက် ဝင်​ေရာက်​နိုင်​သည်။ ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​ဆိုဒ် ညာ​ဘက်​ေဘး​ရှိ connect with facebook ခ​လုပ် အ​ြပာ​ေရာင်​ကို နှိပ်​၍ facebook တွင် ဝင်​ေရာက် လိုက်​သည်​နှင့် ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​သို့ ဝင်​ေရာက်​ြပီး​ြဖစ်​သည်။
This entry was posted in ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် and tagged Facebook, wordpress, လုပ်​ေဆာင်​ချက်​များ​, ဝန်​ေဆာင်​မှု​များ​, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် on November 20, 2010 by mmpressadmin. Search for:
Recent Posts WordPress Custom Menu အား အ​သံုး​ြပု​ြခင်း​Using Export & Import
ြမန်​မာ​ြပည်​မှ ဂ​ရင်း​နစ် မှတ်​တမ်း​ဝင် အ​ေြကာင်း​အ​ရာ​များ​HTTPS Everywhere
Recent Commentsmmpressadmin on လွယ်​လွယ်​ကူ​ကူ ဖိုင်​ေတွ မျှ​ေဝ​သံုး​စွဲ​ြက​မယ်Ko Naing on လွယ်​လွယ်​ကူ​ကူ ဖိုင်​ေတွ မျှ​ေဝ​သံုး​စွဲ​ြက​မယ်Zox on လွယ်​လွယ်​ကူ​ကူ ဖိုင်​ေတွ မျှ​ေဝ​သံုး​စွဲ​ြက​မယ်Archives March 2013
ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် လမ်း​ညွှန်​များ​Meta Register Log in